एजेन्सी । अमेरिकाको राष्ट्रपतिको आगामी कार्यकालका लागि डेमोक्याटिक पार्टीको तर्फबाट जो बाइडेनले उम्मेद्वारी दिने सुनिश्चित भएको छ । यही बर्ष सन् २०२० को नोभेम्बरमा हुने निर्वाचनमा उनले वर्तमान राष्ट्...
हामी काेराेना महामारीको विरूद्ध लड्न सक्षम भएका छौं: ट्रम्प
वाशिंगटन । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रवार अमेरिकाले कोरोनाभाइरस महामारीको सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट बाहिर आएको दावी गरे। अमेरिकामा राम्रो रोजगारीको संख्याको विमोचन पछि डोनाल्ड ट्रम्पले एक समाच...
अमेरिकी संस्थागत नस्लवादको अन्त्य हुनु आवश्यक छ: संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार प्रमुख
एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्र संघका शीर्ष मानव अधिकार अधिकारीले भनेका छन कि अमेरिकाको जर्ज फ्लोडको हिरासतमा भएको घटनाले कालो व्यक्तिविरूद्धको पुलिस हिंसाको पर्दाफास भएको छ र यसले संयुक्त राज्यमा जताततै बि...
वाशिंगटन । अमेरिकी नागरिक अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका धेरै संस्थाहरूले बिहीबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विरूद्ध मुद्दा हालेका छन्। सुरक्षाकर्मीहरूले ह्वाइट हाउसको अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका...
स्पेनले फ्रान्स र पोर्चुगलसँगको सीमा नाकाहरू खुला गर्ने
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको अत्यधिक सङ्क्रमण भएका मुलुकहरूमध्येको यूरोपेली मुलुक स्पेनले महामारी नियन्त्रणका लागि बन्द रहेका फ्रान्स र पोर्चुगलसँगको सीमा नाकाहरूलाई आगामी जुन २२ पछि खुला गर्ने भएको छ । ...
अमेरिकामा गान्धीको प्रतिमा तोडफोड
एजेन्सी । अमेरिकास्थित भारतीय दूतावास अगाडि अवस्थित महात्मा गान्धीको प्रतिमामा तोडफोड भएको छ । अश्वेत एक अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोयडको प्रहरी हिरासतमै रहेको बेला मृत्यु भएपछि शुरु भएको आन्दोलनका क्रममा...
वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकी कान्छी छोरी टिफनी ट्रम्पले अफ्रिकी-अमेरिकी काला नागरिक जर्ज फ्लोडको मृत्यु भएको घटनामा प्रदर्शनकारीहरूलाई समर्थन गरेकि छन्। कानून स्नातक टिफनीले इन्स्ट...
‘जर्ज फलोयड’ विरोध प्रदर्शनका कारण अमेरिकामा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण !
एजेन्सी । अमेरिकी सर्जन जनरल डा. जेरोमी अडाम्सले अश्वेत नागरिक जर्ज फ्लोइडको हत्याको विरोधमा देशभर भइरहेको विरोध प्रदर्शनका कारण अमेरिकामा दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन...
पाकिस्तानमा कोरोना संक्रमितको संख्या ८० हजार नाघ्यो
एजेन्सी । पाकिस्तानमा कोरोना भाइरस सङक्रमितको संख्या लगातार बढ्दै गएको छ । पाकिस्तानमा संक्रमितको संख्या ८० हजार ४८३ पुगेको छ । विगत २४ घण्टामा पाकिस्तानमा ४ हजार ६५ संक्रमित थपिएका बताइएको हो । पाकि...
भारतमा एकैदिन झण्डै नौ हजार सङ्क्रमित
नयाँ दिल्ली । भारतमा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बृद्धि हुदै गइरहेको छ । अघिल्ला दिनहरुमा भन्दा पछिल्ला दिनहरुमा दैनिक सङ्क्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । बुधबार ...
जर्ज फ्लोयडको मृत्युको विरोधमा न्यूयोर्क शहरमा लुटपाट
न्यूयोर्क। डाँकुहरूले म्यानहट्टनको लोकप्रिय शपिंग सेन्टर म्याडिसनको म्याकीज स्टोर र फिफथ एभिन्यूज सहित थुप्रै खुद्रा तथा लक्जरी स्टोरहरूमा हजारौं डलरको सामानहरू तोडेर लुटेर लगेका छन। न्यूयोर्कमा अफ्र...
एजेन्सी । अमेरिकामा जर्ज फ्लोडको मृत्युपछि काला जातीहरूले न्यायको लागि प्रदर्शन गरिरहेछन्। प्रहरीले सोमबार ह्वाइट हाउस नजिकै प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबित गर्न अश्रुग्यास र रबरको गोली प्रयोग गर्‍यो। यसै...
नेदरल्यान्डमा रेष्टुँरा, सिनेमा घर, रङ्गमञ्च, म्युजियम खोल्न अनुमति
काठमाडौं । नेदरल्यान्डमा तीनमहिना पछि रेष्टुँरा खुलेका छन् । रेष्टुँरा खुले पनि सामाजिक दूरीको नियम पालना गर्न कडा निर्देशन दिइएको छ । रेष्टुँरासँगै नेदरल्यान्डमा सिनेमा घर, रङ्गमञ्च र म्युजियम पनि...
जर्ज फ्लोइडको मृत्यु ‘मानव हत्या’ – पोस्टमार्टम रिपोर्ट
एजेन्सी । अमेरिकामा भइरहेको हिंसात्मक गतिविधि अन्त्य गर्न सेना र प्रहरी परिचालन गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चेतावनी दिएका छन् । प्रहरी हिरासतमा रहेका एक व्यक्ति जर्ज फ्लोइडको हत्यालाई लि...
सिंगापुरमा आजबाट विद्यालय खुल्दै
काठमाडौं । दक्षिण सिंगापुरले आजबाट लकडाउनमा छुट दिएको छ । आजबाट सिंगापुरमा विद्यार्थी विद्यालय जान सक्नेछन् । उत्पाद र निर्माण क्षेत्र पनि केही सर्तसहित खोल्न अनुमति दिइएको बीबीसीले जनाएको छ । कोरोन...
इजरायली प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा कोरोना संक्रमित
इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको कार्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । नेतान्याहुको कार्यालयले एक कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको जानकारी दिएको हो । ...
वाशिंगटन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा जर्ज फ्लोडको मृत्युपछि पनि काला जातीहरू हिंसात्मक प्रदर्शनमा उत्रेका छन। करीव ३० शहरहरूमा हिंसात्मक प्रदर्शनहरू जारी राखेका छन। 'द न्यु योर्क टाइम्स' समाचारका अनुसा...
आजबाट भारतमा लकडाउनको पाचौं चरण ‘अनलक-१’ शुरु
काठमाडौं । छिमेकी देश भारतमा आजबाट लकडाउनको पाचौं चरण शुरु हुँदैछ । जसलाई अनलक-१ पनि भनिएको छ । 'अनलक-१' अन्तरगत केन्द्र सरकारले एक निर्देशन जारी गर्दै केही क्षेत्रमा मात्रै लकडाउनलाई सिमित गरेको छ ...
ट्रम्पले गरे G-7 शिखर सम्मेलन सेप्टेम्बरसम्म स्थगित गर्ने घोषणा
वाशिंगटन।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जूनमा आयोजित G-7 शिखर सम्मेलन सेप्टेम्बरसम्म स्थगित गर्ने घोषणा गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिले पनि जी-7 मा समावेश भएका देशहरूको सूची बढाउने आफ्नो इरादा...
दुई वर्षमुनिका बालबालिकालाई मास्क लगाइदिनु खतरनाक
एजेन्सी । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसका कारण वर्तमान समयमा मास्क लगाउनु सामान्य बनिसकेको छ । मास्क प्रयोगले हामीलाई संक्रमणबाट जोगाए पनि दुईवर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाका लागि भने खतरनाक साबित ह...